🥇 ▷ Seefta 'Pokémon Seeword' iyo 'Shield' ayaa ku tusaysa qaababka Galar trailerkiisa cusub ✅
Seefta ‘Pokémon Seeword’ iyo ‘Shield’ ayaa ku tusaysa qaababka Galar trailerkiisa cusub
Nintendo Ballanqaadkiisii ​​ayuu ilaaliyay oo maantana wuxuu daaha ka qaaday macluumaad cusub Seefta Pokémon Y Pokémon Shield, magacyada ku soo bixi doona si gaar ah ‘Switch Y Switch Next Lite’ Nofeembar 15. Kuwa Kyoto ayaa sii daayay trailer cusub oo muujinaya Galar foomam, isbeddelka isbeddelka u beddelaya muuqaalka iyo nooca Pokémon kaliya ee gobolka la xusay. Waxaad ka arki kartaa hoosta:
Horudhaca waxaad ku arki kartaa isbeddelada ku jira saddex jilayaasha. Midka koowaad waa Dhiqlaha, oo midabkiisa u beddelaya madow oo helay koofiyad qaab qiiq qiiq ah; Waxay isu beddelaysaa nooc sun / sunno ah. Dhinaceeda, Zigzagoon iyo Linoone Waxay sidoo kale helayaan codad madow oo noqdaan xumaan / caadi. Waa muhiim in la ogaado in, intaad sii joogtid Galar, Linoone wuxuu hadda isu beddeli karaa Obstagoon, daanyeer aan ka labalabeynin inuu muujiyo gardarradiisa.
Morpeko wuxuu beddeli karaa muuqaalkiisa iyo dhaqankiisa isagoo uga mahadcelinaya kartidiisa Mutapetito
Shirkadda waxay ka faa’iideysatay agabkii ay u soo bandhigtay Morpeko, pokémon koronto cusub oo la mid ah Pikachu. Dabcan, marka la beddelo qaab awoodiisa Mutapetito waxaa ku dhaca “isku dheelitir la’aan hormoon” ah, si muuqaalkiisa iyo dabeecadiisu ay noqdaan qaar bellicose oo nooca loo beddelo mid xun. Weerarkiisa Aural Wheel ayaa sidoo kale saameyn cusub ku leh xafiiltanka.
Seefta Pokémon Y Pokémon Shield ma heli doonaan jiritaanka Team Rocket, hase yeeshe, taasi micnaheedu maahan in hamigeena uu ka xor yahay tuulooyinka. Kooxda Yell, oo uu hogaaminayo Roxy, ayaa noqon doonta kuwa cusub ee la tartamo. Waxay joogi doonaan meel kasta oo aan booqanno, had iyo jeer hadafka ah in la carqaladeeyo horumarka aan sameyno oo hoggaamiyahoodu noqdo ku guuleystaha Galar.
Shaki la’aan, keenista cusub ee Pokémon waa soo jeedinta ugu adag ee Nintendo ee rubuc qarnigii ugu dambeeyay ee sanadka. Intaas waxaa sii dheer, soo bandhigiddiisa ayaa la filayaa inay caawiso kor u qaadida iibka Kirismaska ​​ee loo yaqaan ‘Switch Lite’, kala duwanaan ka jaban oo yar oo iib ah oo sii socon doonta laga bilaabo Sibtember 20 ee $ 200 – la saadaalin karo 200 euro.